Trestolone Acetate (MENT) को लागि शरीर सौष्ठवको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
फेसबुक इन्स्टाग्राम twitter
कारखानाहरु र संस्थाहरु को लागि औषधि ग्रेड उत्पादनहरु
सेप्टेम्बर 29, 2019
Trestolone Acetate (MENT) को बारेमा सबै कुरा
1.Wrest Trestolone Acetate (MENT) के हो? 2। कसरी Trestolone एसीटेट काम गर्दछ?
3. Trestolone एसीटेट को उपयोग (MENT) 4.Trestolone एसीटेट (MENT) खुराक
5.Trestolone Acetate (MENT) आधा जीवन 6.Trestolone Acetate (MENT) चक्र
7.Trestolone Acetate (MENT) परिणामहरू 8.Trestolone Acetate (MENT) काट्नका लागि
9.Trestolone एसीटेट (MENT) बल्किंगका लागि 10.Trestolone Acetate (MENT) सुविधाहरू
11.Trestolone Acetate (MENT) समीक्षा 12.Trestolone Acetate (MENT) बिक्रीको लागि पाउडर
13.Trest Trestolone Acetate (MENT) पाउडर किन्नको लागि
1.Wrest Trestolone Acetate (MENT) के हो?
Trestolone एसीटेट (MENT) CAS 6157-87-5, a7 alpha-methyl-nortestosterone (MENT पाउडर) को रूपमा पनि चिनिन्छ एक अत्यन्त शक्तिशाली सिंथेटिक स्टेरॉइड हो जुन टेस्टोस्टेरोन भन्दा पनि बलियो छ। स्टेरोइड शरीर सौष्ठव उद्देश्यका लागि शक्ति प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस स्टेरोइडसँग पुरुष गर्भ निरोधात्मक उपायहरूको लागि प्रयोग हुन सक्ने क्षमता छ। स्टेरोइड पुरुषहरूमा अस्थायी बांझपन पैदा गर्दछ यदि पर्याप्त मात्रामा प्रशासित।
Trestolone एसीटेट (MENT) (6157-87-5) टेस्टोस्टेरोन भन्दा दश गुणा बढी शक्तिशाली छ भन्ने विश्वास गरिन्छ, र नतीजा स्वरूप, यसले धेरै वर्षसम्म उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ। यो पाउडर वा इंजेक्शन जस्ता विभिन्न तरिकाहरू मार्फत प्रशासित छ। यो स्टेरोइड कम वजन लिफ्टर बॉडीबिल्डर्सलाई डाइट फिटनेस रेजिमेन्टका साथ पूरकहरूको साथ स्टेरॉइड संयोजन गरेर सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न उत्सुकको लागि अधिक उपयोगी छ।
2. कसरी Trestolone एसीटेट काम गर्दछ?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 बॉडीबिल्डर्सलाई मांसपेशीहरूको बृद्धि गर्न र एकै समयमा फ्याट कम गर्न मद्दत गर्दछ। इष्टतम नतीजाहरू प्राप्त गर्न, स्टेरोइडलाई अन्य बूस्टरहरूसँग मिसाउन सकिन्छ बार्नेसन र काटिदै शरीर फिजिकको साथ। स्टेरोइडले पिट्युटरी ग्रंथिबाट निकाल्ने गोनाडोट्रोपिनहरूलाई अवरोध गरेर अस्थायी बांझपनको कारण दिन्छ।
स्टेरोइडले गोनाडोट्रोपिन, फोलिकल उत्तेजक हार्मोन र कम मात्रामा पनि लुटेनाइजिंग हर्मोनको रिलीज रोक्छ। Follicle उत्तेजक हार्मोन (FSH) र Luteinizing हार्मोन (LH) spermatgenesis को प्रक्रिया को लागी आवश्यक छ, यस प्रक्रियाले टेस्टेजले शुक्राणुजन उत्पादन गर्दछ।
जब रिलीज LH र FSH रोकिन्छ, शुक्राणुजनन सम्पन्न हुँदैन। LH लाई दबाउन थप sperms को उत्पादन बाधा र कर्टेल टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, यसैले बांझपन। MENT पाउडर एन्ड्रोजनमा निर्भर अधिकांश कार्यहरूको लागि एक पर्याप्त प्रतिस्थापन चिकित्सा हो। शरीर सौष्ठवको लागि सुपरड्रोल (मेथिस्टरोन) को एक गहन समीक्षा
3. Trestolone एसीटेट को उपयोग (MENT)
कालो बजार डिलरहरू वा काउन्टर पूरक कम्पनीहरूमा उनीहरूको लोकप्रियताको otherणी रहेको अन्य एनाबोलिक स्टेरोइडहरूको विपरीत, ट्रास्टोलोन एसीटेट वैध चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि यसको प्रतिष्ठा हो कि यसले शरीर सौष्ठव समुदायहरूमा लोकप्रिय बनाउँछ। MENT पहिलो पटक 1960s मा उत्पादन भएको थियो
हालसालै, एक अनुसन्धानमा आधारित फार्मास्यूटिकल कम्पनी र जनसंख्या काउन्सिल स्केरिले पुरुष जन्म नियन्त्रण उपचारका साथै हर्मोन प्रतिस्थापनको उद्देश्यका लागि यस स्टेरोइडमा अनुसन्धान गरेपछि यस स्टेरोइड उत्पादन गर्ने कुरामा चासो देखाएको छ। यी कम्पनीहरूले शरीर सौष्ठवको लागि उपयुक्त स्टेरोइडको साथ बिभिन्न लक्षणहरू पत्ता लगाएका छन्। यसका साथै, यो स्टेरोइड एन्ड्रोजन प्रतिस्थापन थेरापीमा व्यापक रूपमा उपयोगी छ।
गर्भनिरोध र एन्ड्रोजन प्रतिस्थापन थेरापी र गर्भनिरोध बाहेक, इंट्रामस्क्युलर तयारीको रूपमा वा ट्रान्सडर्मलको रूपमा, त्यहाँ अन्य ट्रिस्टोलोन एसीटेट (MENT) प्रयोग गर्दछ प्राथमिक हाइपोगोनैडिजम, गंजापन, हड्डीको ह्रासको क्षय, प्रोस्टेट क्यान्सर, टेस्टिकुलर विफलता, BHP, ASIH, s सारकोपेनिया, cachexia र मांसपेशिको खेरिज्राफ साथै खेल बृद्धि र शरीर निर्माण सहित।
4.Trestolone एसीटेट (MENT) खुराक
MENT एक औषधिको रूपमा व्यावसायिकिकरण गरिएको छैन, त्यहाँ खास विकसित गरिएको छैन Trestolone Acetate (MENT) खुराक स्टेरोइडका लागि निर्देशन। अत्यधिक शक्तिशाली स्टेरोइड हुनाले, साना खुराक बॉडीबिल्डर्सका लागि प्रभावकारी हुनेछ। केही अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि औषधि टेस्टोस्टेरोन भन्दा दश गुणा बढी शक्तिशाली छ र शुक्राणुजननसलाई दमन गर्दछ, टेस्टोस्टेरोनको भन्दा २० गुणा बढी प्रभावकारी।
नतिजाको रूपमा, प्रति दिन 10mg (सामान्यतया 3-16mg) भन्दा अधिक खुराक शुरुआतीहरूको लागि प्रभावकारी हुनेछ। यस औषधिको तेलमा आधारित ईन्जेक्टेबलहरू 10-20mg लगभग दुईदेखि तीन दिनको अन्तरालमा लिन सकिन्छ। केहि मानिसहरु 10mg भन्दा बढि खुराक को लागी राम्रो Trestolone Acetate (MENT) नतिजा को लागी विचार गर्न सक्दछ किनकि औषधीको प्रभावकारिता सबै मानिसहरुको लागी एक समान छैन।
विभिन्न व्यक्तिसँग औषधिको प्रोजेेसनल र एस्ट्रोजेनिक गुणहरूको लागि संवेदनशीलताको विभिन्न डिग्री हुन्छ। उच्च खुराक को सिफारिश भने गरिएको छैन किनकि ती गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
Trestlone का अनुभवी प्रयोगकर्ताहरू 20-50mg को खुराक दिनदिन प्रयोग गर्न सक्दछन्। यद्यपि यो लिइएको फारममा निर्भर हुन सक्दछ। उदाहरण को लागी, इंजेक्शन योग्य फार्म ट्रान्सडर्मल र मौखिक फारम भन्दा थोरै कम हुन सक्छ। धेरै जसो केसहरूमा, तथापि, यो औषधि मौखिक रूपमा प्रशासित हुँदैन; ईन्जेक्सन र ट्रान्सडर्मल समाधानहरू यो औषधि लिनको लागि उत्तम तरिकाको रूपमा सिफारिस गरिन्छ। एस्ट्रोजेन र प्रोलैक्टिन साइड इफेक्टहरू कम गर्न, स्टेरोइडलाई प्रोब्याक्टिन इनहिबिटरहरू जस्तै काबरगोलिन र एरमिडेक्स जस्ता अरोमाटेस अवरोधकहरूको साथ प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
केही अनुभवी उपयोगकर्ताहरु 50 - 75mg को खुराक लिन सक्छन्4हप्ता को एक चक्र को लागी। यी प्रयोगकर्ताहरूले डोजलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्दछ, त्यो हो, सुत्नु अघि र अर्को ब्यूँझनुपर्दा। विज्ञहरूले 75-100mg सम्मको खुराक लिन सक्दछन्। यस्तो खुराक तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, तल देखाइएको छ:
बिहान - 25mg
पूर्व कसरत- 25-50mg
सुत्नु अघि वा रातमा- 25mg
Trestolone Acetate को खुराक अन्तर्गत र प्रभावकारी परिणामहरूको लागि जब एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ। एक, तसर्थ, फ्याट उन्मूलन र मांसपेशिहरु जोड्न को लागी एक राम्रो आहार राख्नु पर्छ। यो workouts को एक प्रभावी दिनचर्या कायम गर्न को लागी आवश्यक छ साथ साथै लगातार प्रयोग जो सही खुराक परिणामहरु लाई पछ्याउँदछ प्रभावकारी परिणाममा र साइड इफेक्ट कम गर्न।
5.Trestolone Acetate (MENT) आधा जीवन
एक स्टेरोइड आधा जीवन को लागी शरीर द्वारा लिईएको औषधि ग्रहण गर्न र लिइएको रकम को झन्डै आधा समाप्त गर्न लिइएको समयलाई जनाउँछ। Trestolone एसीटेट आठ-बाह्र घण्टा (8-12 घण्टा) को बीचको आधा जीवन।
नतिजा स्वरूप, दिनभरि एक साना डोजमा औषधि लिन सक्नुहुन्छ, जसले यो रगतमा निरन्तर उपस्थित रहेको सुनिश्चित गर्दछ। यी खुराक एक दिनमा दुईदेखि तीन अन्तरालहरूमा लिन सकिन्छ। रगतमा लागुपदार्थको विभिन्न सांद्रताको परिणाम स्वरूप, यो आवश्यक छ कि प्रयोगकर्ताहरूले औषधिको आधा जीवन गणना गर्न सक्दछन्। यो प्रयोगकर्तालाई समय समयमा खुराकको सेवन गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि उदाहरणका लागि एकले चार दिनको 50mg लिने निर्णय गर्दछ भने, चार हप्ताको चक्रमा, र दवाईले 8hours को आधा जीवन हुन्छ भन्ने धारणा अन्तर्गत, रगतमा एकाग्रता भिन्नता निम्नानुसार हुन सक्छ:
यस खुराकमा, एकले 8- घण्टा अन्तरालमा 25mg लिन सक्छ। यदि खुराक6AM मा शुरू हुन्छ भने, 12.5 घण्टा पछि 8mg हुन्छ (2 PM) जब दोस्रो खुराक लिइन्छ। दोस्रो खुराकले 25mg समावेश गर्दछ, जसले 37.5mg मा एकाग्रता बढाउँदछ।
आठ घण्टा दोस्रो खुराक पछि (10 PM), एकाग्रता 18.75mg हुनेछ। आठ घण्टा पछि, यो अर्को दिनको6AM हुनेछ, जब त्यस दिनको लागि पहिलो खुराक लिइनेछ। यसको मतलब यो हो कि दोस्रो दिनको पहिलो खुराक बनाउने छ जब अघिल्लो दिनबाट शरीरको बारे मा 9.4mg का घनत्व हुन्छ।
यस्तो बान्कीले वर्कआउट्स अघि र पछाडि रगतमा स्टेरॉइडको निरन्तर एकाग्रता सुनिश्चित गर्दछ। Trestolone Acetate (MENT) औषधिको आधा जीवन गणना कसरी गर्ने भन्ने बारे थाहा पाएर प्रयोगकर्ताहरू लाई यो सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ कि औषधीको एकाग्रता एन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधिको अवधिमा मात्र हो, जुन पहिले, workouts पछि पनि हो। Trestolone Acetate (MENT) आधा जीवनको उचित गणनाले प्रयोगकर्तालाई खुराक प्रबन्ध गर्न र लाभदायक परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
6.Trestolone Acetate (MENT) चक्र
जब ट्रिस्टोलोन एसीटेट लिन आउँछ बिभिन्न व्यक्तिहरूले फरक चक्र प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो मुख्यतया एक औषधि संग एक को अनुभव मा निर्भर गर्दछ। उनीहरूले प्राप्त गरेको चक्रको प्रभावहरू पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्दछ, कुनै पनि चक्र प्रतिबद्ध गर्नु अघि उनीहरूको लक्ष्य र उद्देश्यहरूमा निर्भर गर्दै।
जब तपाईं एक चक्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यो चक्रको लम्बाई र रगतमा लाग्ने औषधिको एकाग्रतालाई चक्र भरि विचार गर्न आवश्यक छ। राम्रोसँग स्थापित लक्ष्यहरूको साथ, सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्न यो सजिलो हुन्छ Trestolone Acetate (MENT) चक्र प्रतिबद्ध गर्न। Trestolone Acetate को साथ, दुई हप्ताको चक्रको साथ पनि महत्त्वपूर्ण परिणामहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ। जहाँसम्म, सबै भन्दा उपयुक्त चक्र चार देखि छ हप्ता को लागी चलाउनु पर्छ। यो एक आदर्श चक्र हो किनभने यसले एकलाई उनीहरूको ड्याम्प अप गर्नबाट रोक्छ।
7.Trestolone Acetate (MENT) परिणामहरू
Trestolone Acetate एक अत्यधिक शक्तिशाली स्टेरोइड हो कि यसको शक्तिशाली प्रभाव को लागी लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। एउटा सुविधाहरू, किन धेरै मानिसहरूले यस स्टेरोइडलाई विचार गर्दछन्, किनकी यसको प्रभावकारी नतीजाहरू एक छोटो समयमै महसुस भयो। औषधीको छिटो बल बृद्धि गर्न को लागी मानिसहरुको लागी एक शक्तिशाली परिणाम छ।
यस औषधि प्रयोग गर्ने शुरुवातकर्ताले ध्यान नतीजा प्राप्त गर्न सक्दछन् दुई हप्ता सम्म पनि बिना stacking। यसको उच्च क्षमताको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले 3-6mg को सानो खुराकको साथ पनि अविश्वसनीय मांसपेशि लाभ र वजन घटाउने परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। मांसपेशी लाभका परिणामहरू पनि दिगो-स्थायी हुन्छन्, जसले एथलीटहरू र तौल लिफ्टरहरूलाई यस औषधिलाई अत्यधिक रूपमा विचार गर्दछ।
साधारण व्यक्तिहरू बॉडीबिल्डर्स बाहेक अरूले पनि यो ड्रगलाई आकर्षक फिजिक प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। यी परिणामहरू राम्रो कसरत दिनचर्या र उचित डाइटिंग कायम गरेर बढाउन सकिन्छ। औषधिले प्रयोगकर्ताहरूलाई workouts को लागि बढि शक्ति दिन्छ, जसलाई एक उन्नत भूख चाहिन्छ।
को क्षमता Trestolone एसीटेट पाउडर शुक्राणुजन्य प्रक्रिया को नियन्त्रण गर्न स्टेरोइड को रिलीज दबाउन को लागी औषधी पुरुषहरुको लागी चिकित्सा जन्म नियन्त्रण को लागी उपयोगी बनाउँछ।
8.Trestolone Acetate (MENT) काट्नका लागि
Trestolone Acetate काटने मा चासो व्यक्तिको लागि एक लाभदायक औषधि प्रदान गर्दछ। Trestolone Acetate (MENT) काट्ने वजन लिफ्टर र बॉडीबिल्डर्सलाई उनीहरूको शरीरमा धेरै बोसो कम गर्न सक्षम गर्दछ तिनीहरूको शरीरको मांसपेशीहरूमा अनावश्यक तनाव नभए पनि। एक शानदार शरीरको साथ एक दुबै द्रव्यमान प्राप्त गर्न, Trestolone एसीटेट अन्य औषधिहरू सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ एक Trestolone एसीटेट (MENT) काट्ने चक्र मा परिणामहरु बृद्धि गर्न को लागी व्यक्तिगत परिणामहरु र Oestrogenic संवेदनशीलता मा निर्भर गर्दछ।
Trestolone को चरणहरू काट्ने, एकले Winotrol हलोटेस्टिन वा trenbolone जस्तै गैर-सुगन्धित एन्ड्रोजनसँग स्ट्याक गर्न सक्दछ। यस प्रकारको संयोजनले शरीर र कडा पुरुषत्वको कडा परिभाषा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ जुन प्रायः बडीबिल्डर्सले प्राप्त गर्न चाहान्छन्। उच्च संवेदनशीलताको साथ व्यक्तिले Trestolone एसीटेट स्ट्याकिंग गर्दा Deca-Durabolin, Equipoise वा primobalin जस्ता यौगिकहरू थप्न विचार गर्न सक्दछ।
9.Trestolone एसीटेट (MENT) बल्किंगका लागि
Trestolone बल्किंग को लागी अन्य स्टेरोइड संग स्ट्याक गर्न सकिन्छ। Trestolone एसीटेट (MENT) पाउडर बल्किंग सामान्यतया ती व्यक्तिहरूको लागि लक्षित हुन्छ जसले मांसपेशि लाभ बढाउन खोज्छन्, सँधै निरन्तर र व्यवस्थित प्रशिक्षण र व्यायामको साथ। अधिकतर रूपमा, शरीरको बोसो घटाउने प्रयासले कोचिंग अतिशयोक्ति निम्त्याउन सक्छ जसले मांसपेशिको घाटा निम्त्याउन सक्छ। Trestolone, जब उपयुक्त स्टेरोइडसँग मिल्दोजुल्दो छ, शरीरको बोसो गुमाउन, मांसपेशीहरूको द्रुत गति लिन र यसलाई सजिलो बनाउन र शरीरलाई बढी र कडा workouts सहने ऊर्जा र शक्ति प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन।
थोरै समय मा छिटो परिणाम प्राप्त गर्न को लागी मानिसहरु लाई बल्किंग कहिलेकाँहि कठोर हुन सक्छ। त्यस्ता ठूला चक्रहरूले प्रयोगकर्तालाई अधिकतम बल्किंग रकम दिन्छ, जसमा पानी प्रतिधारण समावेश गर्दछ। यी परिणामहरू, तथापि, लामो समयका लागि रहँदैन। स्टेरोइड्स के केहि स्टेरोइडहरू स्ट्याक गर्न सकिन्छ Trestolone एसीटेट (MENT) bulking चक्र को लागी Dianabol, Anadrol, र Trenbolone।
Dianabol एक स्टेरोइड हो जो अत्यधिक तुरुन्त कार्य गर्ने क्षमताको लागि बल्किंगको लागि मानिन्छ र छोटो अवधिमा नै द्रुत लाभ दिन्छ। Dianabol संग Trestolone स्ट्याकिंग 20 हप्तामा मांसपेशियों को6पाउंड सम्म परिणाम हुन सक्छ। डियानाबोल फाइदाजनक पनि छ किनकि यसले ईन्जेक्सनहरू बिना नै घन र ठूलो जनस .्ख्या भएको छ।
डेका-डुराबोलिन, Nandrolone को रूप मा पनि चिनिन्छ, छिटो संयुक्त उपचार र मांसपेशीहरु को पुनःप्राप्ति को खोज्ने व्यक्ति द्वारा bulking को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो पोस्ट चक्र चिकित्साको लागि पनि लाभदायक छ किनकि यसले ऊर्जा खपत कम गर्दछ। यस स्टेरोइडसँग न्यूनतम साइड इफेक्टहरू छन् र साथ साथै एन्ड्रोजेनिक स्टेरोइडहरू जस्तै डियान्याबोलको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Trenbolone मध्यम शक्ति र शक्ति छ र पातलो शरीर को लागी काट्न को रूप मा bulking चक्र को लागी प्रयोग गरीन्छ। यद्यपि यसको उच्च शक्ति छ, यो प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गर्ने हेवीवेट बॉडीबिल्डर्सका लागि लाभदायक नहुन सक्छ। यो, तथापि, कुनै पनि ठूलो चक्रमा स्ट्याक गर्न सकिन्छ।
10.Trestolone Acetate (MENT) सुविधाहरू
Trestolone एसीटेट यसको क्षमताको कारण बजारमा बाहिर खडा छ जुन चिकित्सा विश्लेषकहरू द्वारा पुष्टि गरिएको छ र यो गुणस्तरमा कडाईका लागि पनि परिचित छ। Trestolone एसीटेट को धेरै किसिमका फाइदाहरु छन्, विशेष गरी मानिसहरु जसले आफ्नो शरीरलाई सही बनाउन चाहिरहेका छन् र आफ्नो फिटनेस लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्। मांसपेशिको विकासको साथसाथै वजन घटाउन पनि यो उच्च सिफारिश गरिएको हो। स्टेरोइडले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिक दुबै मांसपेशी लाभको साथ दुब्ला, हन्नेड शरीर प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। शीर्ष केहि Trestolone एसीटेट (MENT) लाभ Trestolone एसीटेट संग सम्बन्धित:
· Trestolone एसीटेट अन्य स्टेरोइडहरू भन्दा छिटो काम गर्न परिचित छ। Trestolone एसीटेट इंजेक्शन पछि तुरुन्त परिणाम दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले शरीरको मांसपेशीहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन रिपोर्ट गरे पछि उनीहरूले खुराक लिए पछि। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यसको नतीजा दीर्घकालीन हो, र प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको मांसपेशीहरू कायम राख्न पुनः इन्जेक्शनको चिन्ता लिनुपर्दैन। ड्रग्सले टेस्टोस्टेरोनको दस गुणा बढी मायोटोपिक प्रभाव प्रदान गर्दछ जसले बजारको कुनै पनि स्टेरोइडको तुलनामा यसको निर्माण मांसपेशीहरूको दर बढाउँदछ।
Rest Trestolone एसीटेट काटने को लागी एक वैकल्पिक औषधि को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ र काटने को लागी यसको क्षमताहरु अत्यधिक बृद्धि छ। औषधीको अद्वितीय गुणहरू हुन्छन् जस्तै अन्य प्रोमोर्मनहरूसँग स्ट्याकिंग जसले काटनेको चक्र सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, यसैले दुबै टिश्युहरूबाट छुटकारा पाउन र बोसो जलाउन खोज्नेको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
· Trestolone एसीटेट बल्किंग चक्रमा उपयोगी साबित भएको छ। ड्रग्सले यसको प्रयोगकर्तालाई उच्च नाइट्रोजन प्रतिधारण दरहरू अनुमति दिन्छ जसले उनीहरूलाई मांसपेशिको गठन बढाउन मद्दत गर्दछ। औषधिले बॉडीबिल्डरहरूले शरीरहरूको एनाबोलिक अवस्था कायम राख्न पनि सुधार गर्दछ।स्तनको क्यान्सरको उपचार गर्न Nolvadex को अन्तिम गाइड
T ट्रेस्टोलोन एसीटेटको प्रयोगले शरीरको प्रोटीन संश्लेषण गर्ने क्षमता बढाउँछ। नतिजा स्वरूप, औषधीले मांसपेशीय ऊतकोंको द्रुत वृद्धि प्रदान गर्दछ किनकि प्रोटीनले शरीरको निर्माण खण्डहरूको रूपमा काम गर्दछ।
Drug औषधि पनि शक्ति स्तर बृद्धि गर्दछ। बृद्धि शक्ति स्तर प्रयोगकर्ता कडा र अधिक लामो प्रशिक्षण को क्षमता विकास गर्न प्रयोगकर्तालाई मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, शक्ति स्तर बढाउन शरीर सौष्ठवहरूको ब्रेक छोटो बनाउन मद्दत गर्दछ, यसैले तिनीहरूलाई बारम्बार कसरत गर्न मद्दत गर्दछ।
Drugs अन्य ड्रग्स जस्तो नभई, trestolone एसीटेट ईस्ट्रोजेनमा रूपान्तरण गर्दैन। एस्ट्रोजेनले मानिसको शरीरमा हानिकारक प्रभावहरू पुर्‍याउँछ, जस्तै इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थकान, र मांसपेशि नोक्सानीको कारण। यद्यपि MENT ले एक पटक ले प्रयोगकर्ताको शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको भूमिका खेल्छ र यसले एस्ट्रोजेनको प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू बचत गर्दछ।
· साथै, धेरै स्टेरोइडहरूको विपरीत, औषधि DHT मा रूपान्तरण गर्दैन। साथै, स्टेरोइडको क्षमता बढेको छ किनकि यो सेक्स हार्मोन-बाइन्डि glo ग्लोबुलिन (SHBG) लाई बाँध्न सक्दैन।
11। Trestolone Acetate (MENT) समीक्षा
Trestolone एसीटेट सधैं एक धेरै शक्तिशाली र प्रभावी anabolic स्टेरॉइड को रूप मा परिचित छ। धेरै व्यक्तिहरूले Trestolone Acetate शरीर निर्माण बॉडीबिल्डिंग औषधि मांसपेशी निर्माणको लागि र चिकित्सा उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले उनीहरूका सकारात्मक ग्राहक समीक्षा मार्फत औषधिसँग सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूले लेखेका केही प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू निम्न छन्:
निक एक 27 वर्ष पुरानो बॉडीबिल्डर छ र शरीर सौष्ठवको लागि Trestolone पाउडरको एक अनुभवी प्रयोगकर्ता हो। निकले आठ महिनाको लागि यो उत्पादन प्रयोग गरेको छ, र उनी परिणामसँग खुशी छन्। उनी भन्छन् कि औषधिले उसलाई चाहेको अनुसार ठिक परिणाम दियो। निकले साइड इफेक्टबिना अविश्वसनीय मांसपेशीहरूको द्रव्य प्राप्त गर्न जारी राख्छ। ऊ खुसी छ कि औषधिले उनलाई भूख, मुड बदल्नलाई कुनै क्षति पुर्‍याएन। निकले यस स्टेरोइडसँग अनुभव गरेका समस्याहरू केवल रातको पसीना र केही अनिद्रा हो। एक अनुभवी शरीर सौष्ठव भएको छ, निक यस्तो पक्ष को लागी प्रयोग गरीन्थ्यो र उनीहरुलाई तनावपूर्ण भेटिएन।
ग्रेग बॉडीबिल्डिंगका लागि ट्रिस्टोलोनको अर्को खुशी प्रयोगकर्ता हो। ग्रेगले यो औषधि प्रयोग गरीरहेको छ र हाल पोष्ट चक्र उपचार पछि उनको दोस्रो चक्रमा आधा बाटोमा छ। उसको दोस्रो चक्रमा, ऊ ठूलो गरीरहेको छ, र नतीजा उत्कृष्ट छन्। ग्रेग चाँडो नै यो चक्र को माध्यम बाट काट्न शुरू गर्ने योजना गर्दैछ। ग्रेग भन्छन् कि उनी शुरुमा दिक्क लागेका थिए र उनी डराउँछन् कि औषधीले उसको शरीरमा खतरनाक साइड इफेक्ट पुर्‍याउँछ। अचम्मको कुरा, औषधि उनी अहिलेसम्म प्रयोग गरेको सब भन्दा राम्रो स्टेरोइड मध्ये एक भएको छ। औषधिले उनलाई उच्च शक्ति, उत्कृष्ट शरीर, र उसलाई विशाल मांसपेशिहरू निर्माण गर्न सक्षम गरेको छ। ग्रेग ड्रगलाई धेरै गर्व छ र भन्छन् कि उनी कसैलाई पनि यो सिफारिश गर्छन्।
क्लिन्टन छोटो अवधि र यस औषधि को सानो खुराक मा प्राप्त गरेको उत्कृष्ट परिणाम को लागी Trestolone Acetate संग आफ्नो अनुभव बाँड्न प्रभावित महसुस। क्लिंटन न त तौल उठानेवाला हो न त शरीर सौष्ठव हो, बरु एक शानदार शरीर र शरीर फिटनेसको लागि जुनसुकै साथ एक फेसन डिजाइनर हो। उसले यो औषधि झन्डै एक वर्षको लागि प्रयोग गरिसकेको छ, र उनी यति खुसी छन् कि दुब्ला मांसपेशीहरू र तन्दुरूस्त शरीर पाउने बाहेक, औषधीले उनलाई कामवासना, स्वास्थ्य, र चिल्लो छालामा सुधार गर्न मद्दत गर्‍यो। औषधिले उसलाई शरीरको बोसो घटाउन पनि मद्दत गर्‍यो, जसले उसलाई धेरै खुसी बनाउँछ। क्लिन्टनले यो औषधि प्रयोग गर्न जारी राख्नुभएको छ जुन उनीसँग छैन र यससँग कुनै समस्या छैन।
12.Trestolone Acetate (MENT) बिक्रीको लागि पाउडर
Trestolone Acetate को निर्माताहरु लाई सुनिश्चित गरीएको छ कि उत्पादन उच्च गुणवत्ता को छ। यद्यपि कालो बजार र भूमिगत ल्याबमा त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले कम गुणवत्ताको उत्पादन र कम मूल्यहरू बिक्री गरिरहेका छन्। कम-गुणवत्ता Trestolone एसीटेट सेवन गर्नाले प्रोस्टेट क्यान्सर जस्ता प्रतिकूल साइड इफेक्टको परिणाम दिन सक्छ। त्यसकारण, खरिदकर्ता र यस उत्पादनको प्रयोगकर्ताहरू खरीद गर्दा सावधान हुनु आवश्यक छ Trestolone Acetate (MENT) बिक्रीको लागि पाउडर.
यसको लोकप्रियता र व्यक्तिको जनसंख्या वृद्धिको कारण जो मूल्यवान् हुन्छ र शारीरिक फिटनेस प्राप्त गर्न चाहन्छ, औषधि विभिन्न स्थानहरूमा पहुँचयोग्य छ। औषधि को एक अतिरिक्त लाभ यो छ कि यो अन्य स्टेरोइड भन्दा एक राम्रो मूल्य को रूप मा उपलब्ध छ। थोक मा पाउडर किन्नको लागि हेर्न खरीददारहरूको लागि कम मूल्यमा उत्पादन पहुँच। उत्पाद दुई संस्करणमा बेचिन्छ, 100mg / ml मा पूर्व मिश्रित शुद्ध तेल र 99% शुद्ध Trestolone एसीटेट पाउडर।
13। जहाँ Trestolone Acetate (MENT) पाउडर किन्नुहोस्
Trestolone Acetate अन्तर्राष्ट्रिय डिलरहरु को लागी उपलब्ध छ जो विश्वव्यापी रुपमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, ब्राजील, र मेक्सिको को बिभिन्न स्थानहरुमा पहुँच योग्य छन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय डीलरहरूले यो ड्रगलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूमा उपलब्ध गराएका छन जसले गर्दा खरीददारहरूले यसलाई आफ्नो प्लेटफर्महरूमा खरीद गर्न सक्दछन्।
र, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ Trestolone Acetate (MENT) पाउडर किन्नुहोस् अन्य अनलाइन साइटहरूबाट अझ राम्रो मूल्यमा, स्थानीय डिलर्सबाट थोरैमा ट्रेस्टोलोन एसीटेट (एमईएनटी) किन्न सकिन्छ तर नक्कली बजारमा भीड भएकोले तपाईंलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादन खरीद गर्दा गुणस्तर जाँच गर्न चेतावनी दिइन्छ। खरीददारहरूले प्राय: स्थापित अनलाइन स्रोतहरू भन्दा कम्पनीको वेबसाइटहरूमा उत्पादन किन्न आवश्यक पर्दछ, र Trestolone एसीटेट (MENT) आपूर्तिकर्ता निश्चित गर्न कि उनीहरूले एक गुणवत्ता उत्पादन प्राप्त गर्दछ।
Trestolone शरीर सौष्ठव र अन्य चिकित्सा उद्देश्यहरु मा एक धेरै विश्वसनीय प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ, जस्तै पुरुष contraceptive। यो औषधि यसको उच्च शक्तिलाई श्रेय दिईएको बजारमा सब भन्दा शक्तिशाली स्टेरोइड रहन्छ। यो औषधि प्रयोगकर्तालाई धेरै फाइदाहरू छन्, र यो धेरै उपयोगी छ। यस औषधि को प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो खुराक तालिका, आधा जीवन गणना, साथै नियमित कसरत र उचित आहार को पालन को पालन गर्नु पर्छ। यदि तपाईं शरीर सौष्ठवको लागि ट्रेस्टोलोन किन्नको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं buyaas.com वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अर्डर राख्न र अधिक जानकारीको लागि सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ।
1। ड्र्याक एलेन, ड्रेक रान्डी; Saunders फार्मास्यूटिकल वर्ड, (2006) p.682
2। एल्क्स; ड्रग्सको शब्दकोश; केमिकल डाटा: रासायनिक डाटा, संरचनाहरू, र ग्रंथसूची। (2014) p.538, 588
3। लेगाटो मारियाना; सिद्धान्त लिंग-विशिष्ट चिकित्सा, (2009) p.363
4। याल्कोव्स्की शमूएल, हे यान, जैन पारिजात; एक्वीस सलुबिलिटी डाटा, (2016) पी 1567 को पुस्तिका
5। Zayas Hilda; स्पेनिश केमिकल र फार्मास्यूटिकल ग्लोसरी, (2005)। पी। एक्सएनयूएमएक्स
Hengfei जीवविज्ञान, 2008 मा फेला पर्यो, उत्पादन, आर एन्ड डी र बिक्री को एकीकृत गर्न को लागी एक उच्च तकनीक औषधि जैव रसायन कम्पनी हो।
Tadalafil को बारे मा तपाईले जान्नु पर्ने सबै
टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट: सबै कुरा एक शरीर सौष्ठव जान्न आवश्यक छ
Yucheng स्टेशन, पश्चिम Yucheng टाउन, Licheng जिल्ला, Luohe सिटी, हेनान प्रांत चीन को